Kuteerera 101 - Hinds Feet Farm
Shoko rekuti “kutevedzera” rinogona kuteverwa kuzwi rechiito rechiLatin rokuti “kukwana” rinoreva kuti “kuva nezvikamu zvose kana zvinhu, pasina chaunoshayiwa”. Vashandi nevazvipiri pano paHinds Feet Farm vanoramba vachiedza "kusashaya chinhu" mukupa kutarisirwa kwakachengeteka uye kusingadhuri kunhengo dzedu kuti dziite zvakanakisa. Isu tinoita izvi tichiramba tichiteerera kune yakasimba mirau uye nhungamiro seNC Inopihwa License uye CARF Yakatenderwa mupi.
Heano mashoma edu ezvino Kutevedzera Zvakaitwa:
• Good Health Inspection report paPuddins' Place neHart Cottage
• Mvumo kubva kuNorth Carolina Department of Environmental Quality (NCDEQ) Division of Water Resources (DWR) kuti ibvise Wastewater Pond iyo yakashandiswa nehurongwa hwekurapa hwekare uye yakabviswa makore mashomanana kumashure. Iyi yemvumo maitiro aisanganisira kuongororwa kwehurongwa hwekuvharwa kwedhamu pamwe nekuomesesa kuyedza uye ongororo kuti ive nechokwadi chekuti icharaswa zvinoenderana neNCDEQ kutungamira.
• Moto Alarm system uye Sprinkler Inspections
• Kuongorora Kudzimisa Moto
• Kuongorora kweJenareta paPuddins'Nzvimbo
• Kubudirira DHSR Kuvaka Ongororo paPuddins 'Nzvimbo
• NPI (National Provider Identifier) ​​Kuongororwazve kweHart Cottage uye Zvirongwa zveZuva zvese
• Kuvandudzwa kwerezenisi reKukumbira Charitable
• Kwegore Mecklenburg County Routine Monitoring
Ikozvino Basa Rokuteerera riri kuenderera mberi:
• NCDHS Mental Health License yePuddins' Place, Hart uye zvose Zvirongwa zveZuva
• CARF (Komisheni pamusoro peAccreditation of Rehabilitation Facilities) Re-Accreditation
• Cardinal Home Based and Community Services (HCBS) Final Desk Check Ongororo
Tinokutendai kunhengo dzedu dzinotibvumira kukushandirai nesimba uye nekuvimbika.